မြန်မာနိုင်ငံ၏ အချုပ်အခြာအာဏာအား ထိပါးခြင်း မပြုရန် အမေရိကန် သံအမတ်ကို ဆရာတော် ဦးပါမောက္ခ ? - Yangon Media Group
မြန်မာနိုင်ငံ၏ အချုပ်အခြာအာဏာအား ထိပါးခြင်း မပြုရန် အမေရိကန် သံအမတ်ကို ဆရာတော် ဦးပါမောက္ခ ?
အမေရိကန်သံအမတ်အနေနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အချုပ်အခြာအာဏာအား ထိပါး ခြင်းမပြုရန် မကွေးကျောင်းဆရာတော် ဦးပါမောက္ခမှ ၁ဝ ကြိမ်မြောက် ရုံးထုတ်ချိန်တွင် ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ၁ဝ ကြိမ်မြောက်ရုံးချိန်းကို ဇန်နဝါရီ ၂၄ ရက် နံနက်ပိုင်းတွင် ကမာရွတ်မြို့နယ် တရားရုံး၌ ရုံးထုတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
”အမေရိကန်သံအမတ်က မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အချုပ်အခြာအာဏာကို ထိခိုက်ပုတ်ခတ် စော်ကားလို့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ ပြန်ပြီးတော့ ချေပတာ။ တရားစွဲတာ။ လက်ရှိ နှစ်နိုင်ငံချစ်ကြည်ရေးမှာ ဒါဟာအလွန့်အလွန်ကို မှားယွင်းပါတယ်။ ဆရာတော်ဦးဥတ္တမ ကနေပြီးတော့ အင်္ဂလိပ်ဘုရင်ခံကို မင်း မြန်မာနိုင်ငံက ထွက်သွားဆိုတဲ့စကားဟာ ဝံသာနုစိတ်ဓာတ်နဲ့ မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်ကိုအခြေခံတဲ့ စကား နောက်တစ်ခါ အမေရိကန်သံအမတ် ဖြစ်စေ၊ အခြားသောသံအမတ်ဖြစ်စေ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အချုပ်အခြာအာဏာကို ထိခိုက်ပြီး တော့ ရိုဟင်ဂျာအကြောင်း ပြောလာမယ်ဆိုရင် အဲဒီသံအမတ်ကို ပါးဖြတ်ရိုက်မယ်။ အမေရိကန်သံအမတ်ကို ဒီနေရာကနေပြီးတော့ မကွေးကျောင်းဆရာတော် သတိပေးလိုက်မယ်”ဟု ရုံးထုတ်စဉ် ပြောကြားခဲ့သည်။ ၁ဝ ကြိမ်မြောက်ရုံးချိန်းတွင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတစ်ဦးနှင့် တပ်ကြပ်ကြီးတစ်ဦးအား စစ်ဆေးခဲ့ပြီး ထူးခြားချက်မရှိခဲ့ဘဲ လာမည့် ၃၁ ရက်သို့ ရုံးချိန်းထပ်မံချိန်းဆိုထားကြောင်း မကွေးကျောင်းဆရာတော် ဦးပါမောက္ခ၏ ရှေ့နေ ဦးအောင်သူရိန်ထွန်းထံမှ သိရသည်။
”လာမယ့်ရုံးချိန်းမှာ စွဲချက်တင်သင့်၊ မတင်သင့် နှစ်ဖက်လျှောက်လဲချက်ပေးဖို့ အစီအစဉ်ရှိတယ်။ နှစ်ဖက်လျှောက်လဲချက်က ဥပဒေအရာရှိနဲ့ ဆရာဝန်ဘက်က ရှေ့နေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ဘက်နဲ့ လျှောက်လဲချက် အပြန်အလှန်ပေးဖို့ အစီအစဉ်ရှိတယ်။ ၃၁ ရက် ရုံးချိန်းပြီးလို့ နောက်ရုံးချိန်းမှာ အပြစ်မရှိဘူး၊ စွဲချက်တင်ဖို့ မသင့်ဘူးဆိုလွတ်မယ်။ စွဲချက်တင်ဖို့ ရှိတယ်ဆိုရင် စွဲချက်တင်ပြီးတော့ စစ်ဆေးရမယ်။ ဒီလောက်ပါပဲ”ဟု ရှေ့နေ ဦးအောင်သူရိန်ထွန်းက ပြောသည်။ မကွေးကျောင်းဆရာတော် ဦးပါမောက္ခအား ပုဒ်မ ၅ဝ၅(ခ)နှင့် တရားစွဲဆိုထားခြင်း ဖြစ်ကာ ယခု ၁ဝ ကြိမ်မြောက်ရုံးချိန်းအထိ တရားလိုပြသက်သေခြောက်ယောက်အား စစ်ဆေးပြီးကြောင်းလည်း သိရသည်။ မကွေးကျောင်းဆရာတော် ဦးပါမောက္ခအား ၂ဝ၁၇ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၁၂ ရက်တွင် ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး ၂ဝ၁၇ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၁၄ ရက်တွင် ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ရုံးထုတ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကာ ဒုတိယအကြိမ် ရုံးထုတ်စစ်ဆေးမှုတွင် ငြိမ်းစုစီ ပုဒ်မ ၁၉ အတွက် ထောင်ဒဏ် တစ်လချမှတ်ခဲ့ပြီး ထောင်ဒဏ်တစ်လမှာ ပြည့်မြောက်ပြီးဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ပညာရေး အသုံးစရိတ် တိုးမြှင့်ရေးအတွက် ဆန္ဒပြတောင်းဆိုနေသည့် ကျောင်းသားများ ဖိအားပေးခံရမှုမျ?
အဲဗာတန်နည်းပြရာထူးနှင့်ပတ်သက်သော သတင်းများကို ဆီမြွန်နီငြင်းဆို
တစ်နိုင်ငံလုံး မီးလင်းရေး အတွက် ကမ္ဘာ့ဘဏ်ချေးငွေ ဒေါ်လာသန်း ၄ဝဝ ဖြင့် ဆောင်ရွက်မည်
ယခုဘဏ္ဍာနှစ် နှစ်ဝက်ကျော်ကာလအတွင်း စုစုပေါင်းကုန်သွယ်မှုလိုငွေ ကန်ဒေါ်လာ တစ်ဘီလီယံခန့်ရှိ